OneUp: Rwoga Kutumira KuGoogle Bhizinesi Rangu Kubva kune RSS Rako Kudya | Martech Zone
Kana iwe uri bhizinesi remuno, zvakakosha kuti iwe uchengetedze zvese zviri zviviri webhusaiti yakanyatsogadziriswa pamwe neGoogle Bhizinesi Bhizinesi Akaundi. Vazhinji vashandisi veinjini yekutsvaga havana kumbopururudza kana kuenda kumhedzisiro mhedzisiro inowana yako webhusaiti… ivo vanobatana neiyo mepu kurongedza pane peji rekutsvaga injini (SERP).
Iyo mepu kurongedza ndicho chikamu cheinjini yekutsvaga mhedzisiro peji iyo ine mepu uye mabhizinesi akanyorwa akatenderedza nzvimbo yako yenzvimbo. Zvinotora ruzhinji rweSERP uye ndiyo yekutanga yekuita chiitiko chevashandisi vekutsvaga kuti vawane nzvimbo dzekutengesa dzemuno nemasevhisi.
Izvo zvisingazivikanwe nemabhizinesi mazhinji ndeekuti mepu kurongedza yakanyatsoenderana neakaundi yako yeGoogle Bhizinesi, kwete webhusaiti yako. Kuti uchengetedze chinzvimbo chepamusoro uye kuoneka mumepu yekupakata, account yako yebhizinesi inofanirwa kuchengetedzwa zvakanaka nekuwongororwazve kwazvino uye kuchangobva kuitika uye kugadzirisa. Izvi zviri nyore kuita neyavo Mobile Anwendung… Asi izvo zvichiri kuda kuti iwe ugone kubata zvekare imwe chikuva kana uchishambadzira bhizinesi remuno.
Maitiro Ekubatanidza kuGoogle Bhizinesi Rangu
Ko kana rako bhizinesi riri kuchengetedza rakakura WordPress saiti uye blogging nguva dzose? Izvo zvinopa mukana wekuti ubatanidze zvemukati zvako kune mamwe mapuratifomu, verengi vekupa, uye kunyangwe vezvenhau vezvekushandisa vachishandisa yako Kubatana kuri nyore (RSS) chikafu.
Kunyangwe uchibata uye kugadzirisa zvese zvemukati zvechiteshi chega chega kunogona kuburitsa mwero wekuita pamwe nemhinduro, makambani mazhinji haane zviwanikwa zvekuita izvi. Apa ndipo panoshandiswa michina - uye kubatanidza zvemukati kubva pane chako chikafu kune ezvemagariro mapuratifomu mhinduro yakanaka. Mazhinji mapuratifomu haape RSS kuGoogle Bhizinesi Rangu sarudzo, zvakadaro!
OneUp uye Google Bhizinesi Rangu
OneUp inogonesa mabhizinesi kuronga uye kugadzirisa avo Google Bhizinesi Bhizinesi zvinyorwa. Ipuratifomu inogonesa vashandisi kutumira kune imwe kana nzvimbo dzakawanda panguva imwe chete, wedzera mifananidzo, zvinongedzo, uye Bhatani-Ku-Chiito mabhatani. Iwe unogona kunyange kurodha mifananidzo kune ako mapikicha chikamu.
OneUp haisi yeGoogle Bhizinesi Rangu chete, zvakare inosangana ne Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, uye Pinterest. Zvimiro zvinosanganisira:
Manage Akawandisa Akaundi pamwe Zvikamu - Gadzira zvikamu zveakaundi maakaundi pamwechete, wobva waronga uye kusefa zvinyorwa nezvikamu izvi.
Social Media Khalenda - Ona muongororwo wezvese zvinouya uye zvakaburitswa zvinyorwa, zvigadzirise, uye nekuzvuva-uye-kudonhedza kuti uchinje mazuva.
Canva Kubatanidzwa - Gadzira mifananidzo mu Canva pasina kusiya OneUp, uye wovaita kuti vawedzerwe kunyore kune yako posvo.
Analytics - Ona zvakadzama analytics uye otomatiki inogadzira vhiki nevhiki kana pamwedzi mishumo yemaakaunzi ako enhau enhau.
Hashtag jenareta - Tora mazano ema hashtag ane chekuita nemazita ako makuru, uye otomatiki wedzera iwo kune ako post kana mune yekutanga komendi (ye Instagram).
Multi-mufananidzo uye Vhidhiyo Zvinyorwa - Ronga yakawanda-mifananidzo mifananidzo ine anosvika mashanu mifananidzo mune yega yega posvo, pamwe nemavhidhiyo mbiru.
Ronga Instagram Nhau - Zviratidze kuronga uye kuronga Instagram Nhau, uye udzibudise kuburikidza nezviziviso zvefoni.
Bulk Rongedza Zvemagariro Mapositi - Isa uye rongedza akawanda maposi kamwechete kuburikidza CSV, Google Drive, Dropbox, kana zvakananga kubva pakombuta yako.
Facebook - Rongedza zvinyorwa kuFacebook maProfiles (kuburikidza nezaziso mbozhanhare), pamwe nekutsikisa kwakananga kuFacebook Mapeji uye Mapoka.
Tanga Yako OneUp 7-Mazuva Yemahara Muedzo
Kuzivisa: Ndiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo mukati meichi chinyorwa.
Tags: kurodha kwakawanda google bhizinesi ranguFacebook kubatanidzachikafufeed syndicationgmbgoogle bhizinesi ranguhashtag jenaretainstagram storieslocal searchyemuno seotumira kuGoogle bhizinesi rangurss feedronga google bhizinesi ranguronga magariro enhausocial media kalendariSyndication